AKON'NY FETIN'NY NOELY :: Olona dimy namoy ny ainy, ankizilahy iray nararin'ny toaka • AoRaha
AKON’NY FETIN’NY NOELY Olona dimy namoy ny ainy, ankizilahy iray nararin’ny toaka
Tatitry ny tranga niseho ny andron’ny 24 desambra sy ny tapak’andron’ny Noely 25 desambra, no voaray tetsy amin’ny hopitalibe Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), omaly antoandro. Olona dimy no namoy ny ainy tao amin’ny sampana roa mandray marary ao amin’ io hopitaly lehibe io.
Ny telo tamin’ireo namoy ny ainy ireo dia efa noentina novonjena tao amin’ny sampana vonjy aina (urgence). Efa nialana nenina tao amin’ ny sampana famelomana aina kosa ny roa ambiny. Anisan’ireo narary tonga notsaboina tao amin’ny sampana famelomana aina, tamin’ny alatsinainy 24 desambra, ny zazalahikely iray, efatra ambin’ny folo taona, voalaza fa tsy nahatsiaro tena vokatry ny fobobohana zava-pisotro misy alikaola. Ankoatra azy, nisy lehilahy roa hafa narary noho ny hamamoana ihany koa saingy namoy ny ainy, taorian’ny fizahana nataon’ny mpitsabo azy ny iray tamin’izy ireo.
Nisy vehivavy iray nikasa hamono tena tamin’ny alalan’ny fihinanana fanafody noentina novonjena tao amin’ity sampana iray ity ihany, tamin’ny 24 desambra. Nisy olona iray tratry ny hafatapahan’ny lalan-drà. Olona efatra nararin’ny aretina hafa. Ny faharoa nindaosin’ny fahafatesana dia olona notsaboina tao, tamin’ny alahady 23 desambra, izay namoy ny ainy ny ampitson’iny. «Tsy nisy ny olona narary voapoizina ara-tsakafo tonga teto, hatreto (ndrl: hatramin’ny 25 desambra maraina). Mazàna, ny ampitson’ny fety vao misy olona voan’ izany tonga aty amin’ny hopitaly satria mety ho mbola variana tamin’ny fety aman-danonana.», hoy ny mpitsabo iray tao amin’ ny sampana fameloman’ aina.
Tsy dia mifanalavitra tamin’ny zava-nisy tamin’ ny taon-dasa kosa, hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny sampana vonjy aina, no niseho tamin’ny 24 desambra lasa teo raha ny tarehimarika no jerena. Marary miisa valo amby telopolo amby zatono nandalo tao amin’ io sampana io, ny tontolo andron’ny alatsinainy 24 desambra. Ny roa amby telopolo ihany no voatery notazomina manaraka fitsaboana. Telo no namoy ny ainy: ny iray efa maty no tonga tao amin’ ny hopitaly, ny iray hafa matin’ny fahasemporana ary ny fahatelo nisy fivontosana. Toy ny efa mateti-pitranga, marary na maratra vokatry ny adiady sy fikasihan-tanana ny ankamaroan’ny olona tonga manatona eny amin’ny « Urgence » an’ny hopitaly Hjra. Ankoatra izay, misy ireo niharan’ny lozam-pifamoivoizana sy loza tampoka niseho tao an-trano.
Hatramin’ny omaly antoandro, marary telopolo no tonga teny amin’ny sampana vonjy aina. Ny telo tamin’izany no naiditra hopitaly.
Rongony tao an-trano
Rongony 55 kilao